Madaxwynaha shiinaha “si adag ayaan kaga hortagaynaa cadowga qaybinaya dalkeenna” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxwynaha shiinaha “si adag ayaan kaga hortagaynaa cadowga qaybinaya dalkeenna”
Madaxwynaha shiinaha “si adag ayaan kaga hortagaynaa cadowga qaybinaya dalkeenna”
Madaxwaynaha dalka shiinaha ayaa ku goodiyay in tallabo naxariis la’aan ah ka qaadayaan cid allaale ee isku daya in ay kala qaybiso dal waynaha shiinaha dadka, sida lagu sheegay war-murtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi.
Hadlakaan ayuu ka jeediyay madaxwaynaha shiinaha dhmaadka todobaadki la soo dhaafay ka dib markii uu booqasho ku tagay dalka Naybaal.
“ Qof alaale qofkii isku daya in uu ka jaro gobol shiinaha ka mid ah waa uu halaagsamayaa, waaana bur-burineynaa jirkiisa, lafihiisanna waan shiidaynaa si ay u noqdaan budo” sidaas waxaa yiri madaxweynaha shiinaha.
Waxa uu isntaas ku daray in quwad kasta ee shisheeya ee taageerta isku dayga qaybinta Shiinaha ay riyo ku jirto,Warka madaxweynaha ayaa yimid kadib bilo ay socdeen mudaaharaadyo lagu canbaareeynayo Bekiin, balse dowladda shiinaha ayaa ku eedeeysay in ay jiraan dalal ka hurinayo qalalaase gobollo hoostaga Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha.
Previous articleMadaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo diray fariin ku aadan Xuska 14-ka Oktoobar
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare ee BJFS oo Shacabka Soomaaliyeed la wadaagay Xusuusta dhacdadii 14kii October